ဆော့ဝဲလ်အင်ဂျင်နီယာ ၁ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » Software များအင်ဂျင်နီယာငါ
ရာထူး: Software များအင်ဂျင်နီယာငါ
ဒီ entry level ကိုအနေအထားကိုအဆိုပါပုံရိပ်ဂီယာထုတ်ကုန်များထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိသည်။ ထို့အပြင်, ဒီတစ်ဦးချင်းစီအလိုတော်:
အဓိကကျသော Duty နှင့်တာဝန်များ:
core တာဝန်နှင့်တာဝန်ဝတ္တရားအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။ အခွားသောတာဝန်များကိုတာဝန်ပေးအပ်နိုင်ပါသည်။
, တာဝန်တိုးတက်မှုနှင့်ပြီးစီး၏အနီးကပ်နှင့်မကြာခဏကြီးကြပ်မှုနှင့်စိစစ်အတည်ပြုဖှံ့ဖွိုးတိုးတဘဝသံသရာ၌ရှိသမျှသောအဆင့်ပါဝင်ထုတ်ကုန်မှန်ကန်မှုထုတ်ကုန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုဒ်များအတွက်ယူနစ်စမ်းသပ်မှုစာရေးအာမခံဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်စေ့စေ့ကြည့်ရှုကိုအထောက်အကူပြုရန်လိုအပ်သည်လွှမ်းခြုံနှင့်ထိရောက်မှု၏အဆင့်မြင့်နှင့်အတူအခြေခံကိုဖြေရှင်းဖို့ software development နဲ့ / သို့မဟုတ်ကြီးကြပ်မှုနှင့်အတူကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ပြဿနာများတာဝန်ပေးအပ်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုစစ်ကြောင်း / စီမံကိန်းများအပေါ်ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့သို့အကူအညီပေးရန်။ ဖောက်သည်ထောက်ခံအားပေးမှုအရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုအလေ့အကျင့်များနားလည်မှုပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့တာဝန်ခန့်မှန်းချက်တာဝန်များကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ရရှိသည်ပြ
အောင်မြင်စွာဒီအလုပ်လုပ်ဆောင်စေရန်, တစ်ဦးချင်းကျေနပ်ဖွယ်အသီးအသီးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတာဝန်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖြစ်ရပါမည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလိုအပ်ချက်များ, ကျွမ်းကျင်မှုကိုသိသောဥာဏ်၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် / သို့မဟုတ်နိုင်စွမ်းလိုအပ်သည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်နေရာထိုင်ခင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်မှမသန်စွမ်းတစ်ဦးချင်းစီကို enable လုပ်နိုင်ပါသည်။
ပညာရေးနှင့် / သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံ:
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာသို့မဟုတ်အခြားသင်္ချာသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်သောစည်းကမ်းများကိုအတွက်သိပ္ပံဘွဲ့, စီမံကိန်းများအမျိုးမျိုးအပေါ်အခန်းကဏ္ဍအမျိုးမျိုးအတွက် software များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အစစ်အမှန်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ 0-1 နှစ်ပေါင်း; သို့မဟုတ်ပညာရေးနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်ညီမျှပေါင်းစပ်။
Certificate, လိုင်စင်, မှတ်ပုံတင်:
CC ကိုအတွေ့အကြုံ ++ နှင့် C # စိတ်၏ 0-1 နှစ်ပေါင်းအနည်းဆုံးနှင့်ကဲ့သို့သောအပိုဆောင်း coding ကျွမ်းကျင်မှု, သင်ယူဖို့တတ်လွယ်ခြင်းသရုပ်ပြ: Visual Basic, C ++, C # သည်, Objective-C,VB.NET အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်မှုဆော့ဖ်ဝဲကိုအတွေ့အကြုံများ၏ပို့ဆောင်မှုအတွက် Windows သို့မဟုတ် Linux ကိုအင်ဂျင်နီယာဖှံ့ဖွိုးတိုးတအတွေ့အကြုံအပေါ် software ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲအသင်းကိုအတွေ့အကြုံအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ဆော့ဖျဝဲအင်ဂျင်နီယာများနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ် NET, WCF, MVC Framework ကို, Java XML ကို, NUnit / JUnit သက်သေပြနိုင်စွမ်း, Perforce အတွေ့အကြုံကိုဦးစားပေးမည်
အတွေ့အကြုံယူနစ်စမ်းသပ်ခြင်းမူဘောင်တွေနဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်နည်းပညာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ TeamCity တည်ဆောက် server ကိုအတွေ့အကြုံအတွက် Git အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ Linux နဲ့ Windows အတွက်အတွေ့အကြုံနှစ်ဦးစလုံးအပေါ် software ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲ
Accusoft developer များအဘို့ဖန်တီးစာရွက်စာတမ်းနဲ့ imaging tool များကိုတစ်ဦးကြံ့ခိုင်အစုစုကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ APIs အားနှင့် software development kit များ (SDKs) လျှောက်လွှာနှင့်ဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသုံးပြုရန်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်စာရွက်စာတမ်းကြည့်, အဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှု, image ကို compression, ပြောင်းလဲခြင်း, ဘားကုဒ်ကိုအသိအမှတ်ပြုမှု, OCR နှင့်အခြား image processing တွင် tools တွေပေး, မူပိုင်နည်းပညာကို အသုံးပြု. တည်ဆောက်ထားကြသည်။
1991 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Accusoft စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်နှင့်ကမ္ဘာထဲမှာအများဆုံးခေတ်မီပုံရိပ်နည်းပညာအချို့ကိုအပေါ်အတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်လူတွေအနေနဲ့အလွန်အမင်းပါရမီ, အသိဉာဏ်အုပ်စုတစ်စုအတူတူတတ်၏။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့ဖန်တီးသောအရာကိုဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုသူဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်တွေးခေါ်ရှင်နှင့်အတူကိုယျ့ကိုယျကိုဝန်းရံ။
ဂရိတ်အလုပ်-ဘဝချိန်ခွင်လျှာအခမဲ့မုန် (နှစ်ဦးစလုံးကျန်းမာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ကြင်နာ) နှင့်ရုံမိနစ်ကွာဆိုဒါအမြဲရရှိနိုင်ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက် Foosball, Ping-Pong, ရေကူးကန်စားပွဲတင်, ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုယ်ပိုင်အားကစားရုံဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်နှင့်ဒေသခံမြစ်ကမ်းပန်းခြံအားဖြင့်တည်ခင်းဧည်အခမဲ့အပတ်စဉ် "Tech မှ Talk ကို" နေ့လယ်စာစားပွဲရဲ့ ဒေသခံစားသောက်ဆိုင် venders လစဉ်မွေးနေ့ပွဲနေ့များထိုလူမှုရေးကော်မတီတို့ကထောက်ပံ့ပေးဦးတည်းအစားအစာချွတ်နည်းပညာအသစ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းလျှော့စျေးဆွေးနွေးရန် / သင်ယူ / နားထောင်နိုင်သည်ရှိရာသူချင်း Developers အဖွဲ့များအတွက်ပျော်စရာအုပ်စုတစ်စုလှုပ်ရှားမှုများညှိနှိုင်းထံအပ်နှံ
အပြိုင်အဆိုင်လစာနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုနိမ့်ဆုံးစောင့်ဆိုင်းကာလနှင့်အတူပေးအပ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုးကြေးဇူးမြား၏အချို့စတော့ရှယ်ယာ option ကိုအစီအစဉ်, ပြည့်စုံသောကျန်းမာရေးနှင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာအစီအစဉ် 401k, အားလပ်ရက်, အားလပ်ရက် paid, ကျူရှင်ငွေကြေးပြန်လည်, ပါဝင်သည်, ကုမ္ပဏီတိုတို & ရေရှည်မသန်စွမ်းနှင့်အသက်အာမခံ, ပျော်စရာမိသားစု oriented ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပိုပြီးပေးဆောင်! ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်တစ်ဦးကြိုးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက် Tampa, FL ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ Join!
ACCUSOFT CORPORATION အခွင့်အရေးတူညီမှု့တစ်ခုဖြစ်အလုပ်ရှင် IS
နောက်တစ်ခု: ကို Creative န်ဆောင်မှုများ - မြှင့်တင်ရေး Manager ကို WBNS